Sawir-qaadayaasha tifaftirka si ay isha ugu hayaan | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sawir-qaadayaasha tifaftirka si ay isha ugu hayaan
Iris Gamen | | dhowr
El daabacaadda adduunka sanado badan hadda, ayaa isbedelay waxayna si weyn u kordhisay iibkeeda iyada oo ay ugu wacan tahay sawirada. Sawirka, kaliya ma tixraacno sawirada, laakiin sidoo kale sawirada ayaa ka sii jira nolol maalmeedkeena.
Haa, waxaad xiisaynaysaa adduunka daabacaadda, Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato adduunkan, sidoo kale waxaan magacaabi doonaa sawir-qaadayaal tafatir ah oo ay tahay inaadan seegin..
Shirkadaha isgaarsiinta iyo naqshadeynta iyo xirfadlayaasha, marka ay timaado xoojinta, taageer fariinta isticmaal sawiro si aad u abuurto alaab soo jiidasho leh oo awood u leh inay qabato dareenka macaamilka.
1 Waa maxay shaqooyinka uu leeyahay sawir-qaadaha tifaftirka?
2 Sawir-qaadayaasha Tifaftirka si ay ula socdaan
2.1 Lucia Gutierrez
2.2 jerry pinkney
2.3 Julia Sarda
2.4 Ralph Steadman
2.6 Pauline Baynes
2.7 carmen segovia
2.8 Malika Favre
2.9 Mikel Jasso
Waa maxay shaqooyinka uu leeyahay sawir-qaadaha tifaftirka?
Un Xirfadlaha sawirka tifaftirka, waa in la tababaraa oo aqoon u leeyahay sawirista iyo naqshadeynta. Haddii aad ku takhasustay goobta sawir-qaadista ee daabacaadda, xitaa ka sii fiican.
Shaqada ugu weyn ee xirfadani waxay ka kooban tahay u samee fariimaha si garaaf ah, taas oo ah, iyaga ayaa u xilsaaran naqshadeynta daboolka, sawirada ama sawirada la socda qoraalka, xitaa waxay samayn karaan kartoonnada majaajillada ah ee wargeysyada.
ka sawir-qaadayaasha tifaftirka si loo gaaro natiijada kama dambaysta ah ee saxda ah, la shaqeeyaan qorayaasha dhinac dhinac ah, waa inay qabtaan nuxurka fikradaha ay qorayaashani u sheegayaan. Iyadoo la tixgelinayo dadweynaha shaqada loo hago, qaabka iyo qaabka ay u socoto waa inay noqdaan kuwo ku filan oo loo gudbiyo.
Sawir-qaadayaasha Tifaftirka si ay ula socdaan
Qaybtan waxaan ku tusi doonaa liiska magacyada sawir-qaadayaasha tifaftirka, kuwaas oo ay tahay inaad ogaato oo ku dhiirigelin doona.
Sawir-qaaduhu wuxuu leeyahay a qaab aad u sifooba leh, oo ina xusuusinaya 70-meeyadii. Sawiradiisa, wuxuu ka dhigayaa isticmaalka baloogyo waaweyn oo midab leh, halkaas oo uu isticmaalo palette midabada aasaasiga ah.
Buuggiisa, Ingiriisi ma fududa, waxaan si fiican u arki karnaa qaabkan aan ka hadlaynay inta u dhaxaysa bogaggeeda. La yaabi mayno haddii aad buuggiisa u iibsatid sawirradiisa oo keliya, maadaama ay yihiin kuwo cajiib ah.
Este qaabka shakhsi ahaaneed, wuxuu ku guuleystey inuu u kaxeeyo si ay ugu shaqeyso New York Times, Washington Post, El Mundo ama New Yorker. Oo ma aha oo kaliya tan, taas oo aan ahayn in ay yar tahay, laakiin in uu u sharraxay daabacayaasha kala duwan.
Sawir-qaade iyo qoraaga caanka ah ee buugaagta carruurta ee Maraykanka. Waxa la abaalmariyey dhawr jeer, 2010 waxa uu helay Billadda Caldecott ee buugiisa, The Lion and the Mouse. Abaalmarintan waa mid ka mid ah kuwa ugu sharafta badan adduunka daabacaadda Mareykanka. Waxa ay bilaabatay sannadkii 1938-kii.
Isaga oo in ka badan 100 sawir ka dambeeya, waxa uu ka shaqeeyay buugaagta sawirada, buugaagta aan khayaaliga ahayn, iyo sheeko-yaal. Isticmaalka midabka biyaha iyo farsamada xiisaha leh, Pinkney waxay abuurtaa sawirro heer kale ah.
Sawir-qaade Barcelona, ​​oo naga joojiyay adduunkan tifaftirka tifaftirka tan iyo markii uu bilaabmay. Waxa uu la shaqeeyay macaamiisha sida Penguin Random House, Tundra Books, Simon & Schuster, iyo kuwo kale.
Sus Tallaabooyinka ugu horreeya ee adduunka sawir-qaadista, waxay ahaayeen Disney Pixar iyo khadka tafatirka. Waxa uu ku sameeyay sawiro ku saabsan ciyaarta fiidiyowga adduunka.
Tan iyo markii uu go'aansaday inuu iskii u shaqeysto, wuxuu sawiray buugaag si weyn loo yaqaan sida Charlie iyo Chocolate Factory, Mary Poppins, Wizard of Oz iyo Alice ee Wonderland.
Sawiradiisa, waxaad ku arki kartaa a qaab aad u sifada ah ee 50s, codsanaya jilicsanaan jilicsan kaas oo siinaya mugga iyo hawo dabiici ah oo dabiici ah shaqadiisa.
Sawir-qaade Ingiriis caan ku ah wada shaqayntiisa Hunter Thompson, waxa u dheer sawirradeeda tirada badan ee buugaagta iyo maqaallada.
Shaqada sawir-qaadaha, waxay ka mid yihiin dabeecad siyaasadeed oo mararka qaarkood loo isticmaalo farsamooyin sida caricature si ay wax uga qabtaan arrimaha bulshada. Waad ku mahadsan tahay shaqadiisa, wuxuu awooday inuu la shaqeeyo qorayaal kala duwan, buugaag sawiraya, albamka muusiga, taxane iyo tiirar.
Qaabkiisu waa qaab si fudud loo aqoonsan karo. Waxaa loo soo bandhigay sida a farshaxan khariban oo naxdin leh, kaas oo shaqeeya oo si fiican u qabta xaqiiqada ka baxsan caadooyinka dhaqanka.
Sawir-qaade Isbaanish ah, oo Waxa uu ka soo shaqeeyay wadamo kala duwan oo aduunka ah, waxa uu isku tilmaamay in uu yahay sawir-qaade reer guuraa ah. Mid ka mid ah ololayaasha ugu caansan ee uu la soo shaqeeyay waa ololaha Asisa.
Shaqooyinkiisa ayaa u badan a qaab gaar ah, oo leh dabeecad maanso iyo fikradeed. Waa qaab aad u yar, kaas oo uu ku sameeyo sawirradiisa waxyaabo yar, labadaba sawir iyo midab.
uu sawiro fudud laakiin la aqoonsan karo oo macno badan leh. Helitaanka bartaas minimalism iyo abuurista sawirada kicinta ah waa mid la yaab leh.
Sawir-qaadihii ugu horreeyay ee ka shaqeeya buugga CS Lewis, Taariikhda Narnia iyo shaqooyin kale oo uu qoray Tolkien. Pauline Baynes ayaa sawirtay in ka badan 200 oo buug, marka lagu daro shaqooyinka kale ee ganacsiga.
Wuxuu safarkiisa ka bilaabay adduunka sawir-qaadista, abuurista sawirada buugaagta carruurta, shaqada sii waday noloshiisa oo dhan.
Pauline Baynes, waxay lahayd a qaab male-awaal ah ee sawirradiisa, si aad u badan oo ay u muuqatay in shuqulladani ay nolosha u yimaadeen. Hab kulmiyay khiyaali, sixir iyo hal-abuur buugaag uu tusaaleeyay.
Waxay ku dhalatay Barcelona 1978. Carmen, waxay qaadatay a muddo la raadinayo ujeeddada noloshan, ilaa la go'aamiyo sawirka.
Macaamiisha uu la soo shaqeeyay, waxaan ka helnaa magacyo muhiim ah sida La Vanguardia, The Boston Globe iyo The New Yorker. The Habka uu ula shaqeeyo kooxo farsamooyin kala duwan, laakiin si aan qarsoodi ahayn, kuwa ugu cadcad shaqadiisa waa khad Shiineys ah iyo akril.
Sawirada Carmen Segovia waa diiradda u dhexeeya saxaafadda iyo sawirada buugaagtaMarka lagu daro mashaariicda shakhsi ahaaneed, dabcan.
Laga soo bilaabo Faransiiska, waxaanu ku soo bandhigaynaa tan sawir-qaadaha tifaftirka oo karti sare leh oo caan ah. Waxa uu shaqadiisa kala kaashaday jaldaladaha majaladaha sida Vogue ama The New Yorker. Kaliya maaha inay ka shaqeysay adduunka daabacaadda, laakiin farshaxan-yahanku wuxuu qaaday tallaabo dheeraad ah isagoo naqshadeynaya kabaha kabaha.
Sawirradeeda tifaftirka, Malika Favre waxay ku ciyaartay a qaabka retro ee macnaha guud ee casriga ah. Waxay yihiin shaqooyin isku daraya dareenka galmada iyo minimalism qumman.
Dhinaca qaranka, kuma dhici karno inaan xusno sawir-qaadaha tifaftirka Mikel Jaso. Tan iyo sanado badan Waxa uu u sawiray warbaahinta sida La Vanguardia, El País, Graffica, iyo kuwo kale.. Marka lagu daro daabacayaasha kala duwan sida Planeta ama Penguin Random House.
Tusaalooyinka uu bixiyay. Waxay isticmaashaa farsamooyin aad u kala duwan si ay u fuliyaan, laakiin mid ka muuqda waa isticmaalka kolajka. Waad ku mahadsan tahay farsamooyinkan kala duwan iyo qaabkiisa gaarka ah, waxaad ka heli kartaa shaqadiisa labadaba maqaal joornaal ah iyo ku dhejinta derbiga studio.
Shaqooyinkiisa dhexdiisa, kaftan ama dhaleecayn bulsho ayaa laga heli karaa, taas oo ka caawisa shaqadiisa inay ku kaydsan yihiin xusuusta daawadayaasha.. Sida aan ku arki karno shaqadan ku saabsan mushaharka Isbaanishka ee Diario Público.
Sida aad arki karto, waxaa jira sawir-qaadayaal badan oo heer qaran iyo caalami ah oo lagu xisaabtamayo sawirka tifaftirka. Dunidaanna waa wax soo jiidasho leh. Helitaanka sawir si aad u qabato nuxurka waxa aad rabto inaad u sheegto ma aha hawl fudud, waa caksi. Taasi waa sababta ay tahay hawl lagu aqoonsan karo sawir-qaadayaasha dhexdooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Sawir-qaadayaasha tifaftirka si ay isha ugu hayaan
Hababka garaafyada kala duwan in la tixgeliyo
Waa maxay iyo sida loo sameeyo fanzine